Dugsiyada Quraanka oo la amaanay | Somaliska
Cilmi baaris ay sameeyeen quburo ka tirsan jaamacada Högskolan Väst oo ku taala magaalada Trollhättan ayay ku amaaneen in dugsiyada Quraanka ee ka furan Sweden ay ka qeyb qaataan isdhexgalka bulshada. Cilmi baarayaasha ayaa sheegay in macalimiintu ay si hufan uga shaqeynayaan sidii ay isdhexgalka u fahansiin lahaayeen ardadooda. Cilmi baarista ayaa waxaa ka qeyb qaatay 91 urur oo ka dhisan gobolka Västra Götaland kuwaasoo hawshooda la xiriirto arimaha diinta oo ay u furanyihiin 15 goobood oo lagu barto Quraanka. Dadka baaritaanka sameeyay ayaa wareysi la yeeshay maamulada jaaliyadahaas sida hogaanka, macalimiinta iyo imaamyada Masjidyada. Wareysiyada ayay cilmi baarayaashu ku sheegeen in ay ku ogaadeen in labo ujeedo loo sameeyo koorsooyinka Quranka oo kala ah in diinta iyo carabiga caruurta la baro iyo in la siiyo warbixin ku saabsan arimaha bulshada. Dadka la wareystay ayaa warbixinta lagu sheegay in ay si farxad leh u muujiyeen in Islaamku uu yahay diin casri ah oo ay xiriir la leedahay diimaha Kiristaanka iyo Yuhuuda. Mid ka mid ah dadka la wareystay ayaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa "Diimaha waxaa loogu talagalay dadka, ilaahey looguma tala galin. Dadku waa in ay ku noolaadaan nolol wanaagsan taasoo macnaheeda yahay in Quraanka loo fasiro bulsho casri ah oo ku dhaqanta dimoqraadiyada iyo sinaanshaha" Fikradaas ayaa warbixinta lagu sheegay in ay ka sinaayeen dadka la wareystay ee ka tirsan ururada kala duwan. Warbixintaan ayaa lidi ku ah mida ay faafiyaan cunsuriyiinta oo ah in dugsiyada Quraanka lagu baro caruurta naceyb iyo in ay caqabad ku yihiin isdhexgalka.
Cilmi baaris ay sameeyeen quburo ka tirsan jaamacada Högskolan Väst oo ku taala magaalada Trollhättan ayay ku amaaneen in dugsiyada Quraanka ee ka furan Sweden ay ka qeyb qaataan isdhexgalka bulshada. Cilmi baarayaasha ayaa sheegay in macalimiintu ay si hufan uga shaqeynayaan sidii ay isdhexgalka u fahansiin lahaayeen ardadooda.
Cilmi baarista ayaa waxaa ka qeyb qaatay 91 urur oo ka dhisan gobolka Västra Götaland kuwaasoo hawshooda la xiriirto arimaha diinta oo ay u furanyihiin 15 goobood oo lagu barto Quraanka. Dadka baaritaanka sameeyay ayaa wareysi la yeeshay maamulada jaaliyadahaas sida hogaanka, macalimiinta iyo imaamyada Masjidyada.
Wareysiyada ayay cilmi baarayaashu ku sheegeen in ay ku ogaadeen in labo ujeedo loo sameeyo koorsooyinka Quranka oo kala ah in diinta iyo carabiga caruurta la baro iyo in la siiyo warbixin ku saabsan arimaha bulshada.
Dadka la wareystay ayaa warbixinta lagu sheegay in ay si farxad leh u muujiyeen in Islaamku uu yahay diin casri ah oo ay xiriir la leedahay diimaha Kiristaanka iyo Yuhuuda. Mid ka mid ah dadka la wareystay ayaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa “Diimaha waxaa loogu talagalay dadka, ilaahey looguma tala galin. Dadku waa in ay ku noolaadaan nolol wanaagsan taasoo macnaheeda yahay in Quraanka loo fasiro bulsho casri ah oo ku dhaqanta dimoqraadiyada iyo sinaanshaha”
Fikradaas ayaa warbixinta lagu sheegay in ay ka sinaayeen dadka la wareystay ee ka tirsan ururada kala duwan.
Warbixintaan ayaa lidi ku ah mida ay faafiyaan cunsuriyiinta oo ah in dugsiyada Quraanka lagu baro caruurta naceyb iyo in ay caqabad ku yihiin isdhexgalka.